Caruurta Soomaalida oo lagu taliyay in luuqadooda wax lagu baro | Somaliska
Shir shalay lagu qabtay magaalada Eskilstuna oo ay ka soo qeyb galeen quburo gaaraysa 3000 qof ayaa looga hadlay sida kor loogu qaadi karo heerka waxbarashada ee caruurta soo galootiga, qaasatan kuwa Soomaalida.
Shirka ayaa waxaa ka soo qeyb galay quburo ka kala socota jaamacadaha Mälardalens högskola, Stockholms Universitet iyo Uppsala Universitet oo ka mid ah jaamacadaha ugu afka dheer Sweden.
Quburada ayaa ku talisay in caruurta Soomaalida maadooyinka loogu dhigo labo luuqadood. Swedish iyo Soomaali taasoo ay sheegeen in ay kor u qaadi doonto heerkooda fahanka fasalka. Waxay sheegeen in caruurta Soomaalida ee Sweden ku dhalatay ay xaaladooda fiicantahay balse kuwa cusub ay u baahanyihiin taageero dheeri ah qaasatan sanadka hore.
Talada quburada ayaa ah in fasalka ay joogaan labo macalin oo midna Swedish wax ku dhigayo kan kalena Af-Soomaali ku sharaxayo erayada adag ee aysan fahmin caruurta. Fikradaan ayaan ahayn mid cusub iyadoo horey talooyin nuucaan ah loogu soo jeediyay kamuunada qaar. Shirkaan ayaa ahaa kii ugu horeeyay ee nuuciisa ah.
Waa wax lagu farxo
Arintaan hadda Jaamacaduhu soo jeediyeen , intaan ka ogahay waqti 1 laga joogo ayay ka dhaqan gashay Degmada aan joogo. Qaybta Xanaanada kasoo billoow ilaa fasalka 9 aad waxaa ka shaqeeya Macalimiin badan, oo Luuqadahaas ka caawiya.
Kommunkaana waa kan 4 aad ee dalka ugu soomaali Badan.,, Arintaas kediibna culeys badan ayaa degay oo fudeydaa yimid…. welina hawsho ma dhowa oo Kammunku wuxuu shaqaaleysiinaa Macalimiin da’yar ama da’wayn oo ilmaha Soomaalida D/hoose iyo D/Dhexe kusoo diyaariya.
:::: Sababta Culeyska keentayna waxay ahayd in Caruurtii Soomaaliyeed, intooda badan weliba kuwii yimid 2011 wixii ka danbeeyay 9 aadka dhaafi waayeen ama D/Sare u gudbi waayeen.:::::::
arinta labada sano 2-sano maxaa war laga haayaa aqyaare allaha idin xifdiyee cidi war kaheeso aan isdhaafsano walaalayaal